(မွန်ဝန်ကြီးဗညားဒလ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အမတ်ကြီး ဗညားဒလ (မြန်မာ ၈၈၀-၉၃၄ )ပြင်ဆင်
မွန်ဝန်ကြီး အဂ္ဂမဟာသေနာပတိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗညားဒလသည် သူ့ဘဝတစ်လျှောက်အမှုတော်ထမ်းဆောင်သည်မှာ ကွယ်လွန်သည်အထိ စစ်ချီစစ်တက်စစ်တိုက်လျက်ပင် စစ်၏ဝန်းကျင်တွင် ကျင်လည်ခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ သူကိုယ်တိုင်၏ ဗီဇကပင် စစ်နှင့်ပျော်မွေ့ဟန်တူ၏။ သူဖြတ်သန်းလာရသော ခေတ်ကိုကပင်စစ်ရေးဖြင့် နိုင်ငံကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နေသော စစ်ကာလဖြစ်သည်။ ဤသို့သောကာလတွင် မွန်ဝန်ကြီးဗညားဒလသည် ရာဇဓိရာဇ်အရေးတော်ပုံကျမ်းကို ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲနေသည့် စစ်သေနာပတိတဦးက ပြုစုရေးသားသည့်မွန်မြန်မာ အနှစ် (၄၀)တန်ခိုးပြိုင်ပွဲများကို ဖော်ပြသည့် ရာဇာဓိရာဇ် အရေးတော်ပုံကျမ်းမှာ မည်မျှအသက်ဝင်လှုပ်ရှား၍ မည်မျှပြောင်မြောက်မည်ကိုကား ဆိုဖွယ်ရာမရှိတော့ချေ ။
ဤသို့ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် လုပ်ကြံခဲ့သော်လည်းအမတ်ကြီးဗညားဒလသည် စစ်ရေး၊နိုင်ငံရေး၊စာပေကျမ်းဂန်မှစ၍ နှုတ်ရည်၊ဉာဏ်ရည်၊ဂုဏ်သတ်တိနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်သဖြင့် နှမြောတော်မူသောကြောင့် မကွပ်မျက်ဘဲ သည်းခံတော်မူသည်။ သက္ကရာဇ် ၉၈၁ ခုနှစ်တွင် ဘုရင့်နောင်ကျော်ထင်နော်ရထာသည် ရှမ်းပြည်တစ်လွှားနှင့် ဇင်းမယ်ပြည်ကိုသိမ်းယူရန်အရေး သားတော်ဥပရာဇာနှင့် မှူးတော်မတ်တော်အပေါင်းတို့ကို ခေါ်ယူဆွေးနွေးတိုင်ပင်တော်မူသည်။ ဤအရေးတွင် ဗညားဒလ၏ အကြံပေးလျှောက်ထားချက်ကို နှစ်သက်တော်မူ၍ ကိုယ်တော်တိုင် ရှမ်းပြည်သို့ ချီတော်မူသည်။ ဗညားဒလလည်း နန္ဒကျော်ထင်၊ဗညားပရံ၊ နန္ဒသူရိယ၊ ဗညားသံလိုက်၊ ဘယဂါမဏိ စသည့် တပ်မှူးများနည်းတူ ဆင်တပ်မှူးကြီးအဖြစ် ကြီးကြပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရသည်။ ရှမ်းပြည်ထောင်တလွှားမြို့ရွာများသိမ်းယူပြီးလျှင် ဇင်းမယ်သို့ ချီကြပြန်၏။ ဇင်မယ်ပြည်ကို အောင်မြင်လျှင် ဗညားဒလ၊ ဗညားစက် နှစ်တပ်ကို တိုက်ဆင်တစ်ရာ၊ မြင်းတစ်ထောင်၊ ဗိုလ်တစ်သောင်းတို့နှင့် ဇင်းမယ်ကိုမြို့စောင့်အဖြစ် ကွပ်ကဲထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရလေသည်။ သက္ကရာဇ် ၉၂၀ မင်းတရားကြီးအင်းဝတွင် စံတော်မူစဉ် ဇင်းမယ်မြို့၌ အရေးတော်ပေါ်ပေါက်လာပြန်သည်။ ဇင်းမယ်မြို့ရံဖြစ်သော ဗြဲအနန်း၊ ကလွန်းတုရိုင်း စသည့်မြို့တို့ လင်းဇင်းမင်းနှင့်ပေါင်းကာ ပုန်ကန်ကြသည်။ ဆင်ဖြူများရှင်သည် သမက်တော်သတိုးမင်းစောကို ဇင်းမယ်သို့ ချီစေသည်။ ဇင်းမယ်သို့ရောက်လျှင် ဇင်းမယ်မြို့စောင့် ဗညားစက်တို့နှင့်တိုင်ပင်၍ တုရိုင်မြို့ပျက်ပြီး တုရိုင်စားကို အရှင်ဖမ်းမိလေသည်။ သက္ကရာဇ် ၉၂၁ ခုနှစ်တွင် အမရပူရ အဝကျေးလက်ကို မဏိပူရကသည်းစော်ဘွားက ထိပါးလာသည်။ ဤအရေးတွင် ဗညားဒလ၏အကြံပေးလျှောက်ထားချက်ကို မင်းတရားကြီး သဘောနှစ်ခြိုက်တော်မူသဖြင့် အမတ်ကြီးဗညားဒလကိုပင် အကြီးအမှူးခန့်အပ်ကာ တပ်ပေါင်း ၅ တပ်၊ တိုက်ဆင် ၃၀ဝ၊ မြင်း ၃၀ဝ၀၊ စစ်သည် ၅၀,ဝ၀ဝ ဖြင့် ကြည်းကြောင်းချီစေသည်။ကြည်းကြောင်းမှ ချီတက်သွားသောဗညားဒလသည် မဏီပူရကသည်းစော်ဘွားထံသို့ ရာဇသံစေလေသည်။ စော်ဘွားလည်းအညံ့ခံလေသည်။ ဗညားဒလလည်း တပ်ပေါင်း ၇ တပ်နှင့်အတူ မြို့တွင်းသို့ စစ်ရေးခင်းကျင်းဝင်ရောက်သည်။ ရောက်လျှင် ကသည်းစော်ဘွားအား သစ္စာခံစေသည့် အနေဖြင့် ဆင်ရေး၊မြင်းရေး၊ ဒိုင်းရေး၊ကာရေး၊ ကစားစေသည်။ အမြှောက်သေနတ်တို့ကိုလည်း မြို့ပဲ့တင်ထပ်မျှ ပစ်ဖောက်စေသည်။ ပြီးလျှင် စော်ဘွားနှင့်တကွ တမြို့လုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုပယ်ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ဝင်စေသည်။ မဏိပူရစော်ဘွားသမီးတော်ကိုလည်း မဏိပူရအမတ်(၄)ဦး ဟံသာဝတီသို့တိုင် လိုက်လံဆက်သစေသည်။ သက္ကရာဇ် ၉၂၄ခုနှစ်တွင် အမတ်ကြီးဗညားဒလ၏အကြံပေးလျှောက်ထားချက်အရ ဟိုသာလား၊ မိုးနာ၊ စန္ဒားသို့ချီစေခဲ့ရာ တရုတ်စော်ဘွားများပင်သစ္စာခံကြသည်။ ဘုရင့်နောင်ကျော်ထင် နော်ရထာမင်းတရားကြီးသည် ဘုန်းတန်ခိုးလက်ရုံးနှင့် ပြည့်စုံလာသောအခါ ဆင်ဖြူရှင်ဟူသော အမည်ကို ခံယူလိုလာသည်။ မဟာလက်နက်နိုင်ငံတော်ကြီးကို စိုးပိုင်ရပြီးသည့်နောက် ဆင်ဖြူ တစ်စီးတလေမျှ မရှိလျှင် မတင့်တယ်ဟု ထင်မြင်လာသည်။ သက္ကရာဇ်(၉၂၅) ခုနှစ်တွင်ပင် မင်းတရားကြီးသည် ယိုးဒယားမင်းထံတွင်ရှိသောဆင်ဖြူလေးစီးမှ တစ်စီးကိုဆက်သရန် ဗညားဒလကို ရေးစေကာ ယိုးဒယားမင်းထံပေးပို့စေခဲ့သည်။ ယိုးဒယားမင်းလည်း ဆင်ဖြူကိုမပေးနိုင်ကြောင်း မင်းကျင့်တရား ၁၀ ပါးစောင့်မှပေးနိုင်ကြောင်းစာပြန်၍ စာအဆုံးတွင် တစ်ဂဏန်းရေးထည့်လိုက်၏။ ထိုသို့ ပိဋကတ်အလို ‘ဧက’ ဗေဒင်အလို ‘ဧစ်’ မြန်မာတို့အလို တစ်၊ မွန်တို့အလို အိုက် ဟုခေါ်ရာ ‘အိုက် ဟုဖွယ်’ ‘အွယ်ဟုဖိုက်’ ဆိုလို၍ ထို ‘အွယ်ဟုဖိုက်’ဟူသောစကားသည် ငါမကြောက်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရကြောင်းကို ဗညားဒလလျှောက်ထားသည်။ သံစာတွင်ပါသော ‘တစ်’ ဂဏန်းအနက်ကို လျှောက်ထားသည်။ မင်းကြီးလည်း ဗညားဒလချေလေဟု အမိန့်တော်ရှိ၍ ရာဇာသံရေးပြီးလျှင် ယိုးဒယားသို့ စေပြန်၏။ ထိုစာအဆုံး၌ ‘နှစ်’ ဂဏန်း ရေးထည့်လိုက်သည်။ ထို ‘နှစ်’ ဂဏန်းအလိုကားပိဋကတ်တွင် ဒွေး၊ ဗေဒင်အလို စန်တရ၊ မွန်လို ဒွိတ်ဟု ခေါ်သည်။ ဒွိတ်အလိုကား’ဒွိတ်တလက်’ဟူ၏။ 'မကြောက်ကကြိုးနှင့်ချည်မည်’ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသောစာနှင့် ယိုးဒယားမင်းထံစေလေ၏။ ဤကားအမတ်ကြီးဗညားဒလ၏ ဉာဏ်ပညာစွမ်းရည်ပင်တည်း။
ထိုမျှမကသေး ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးတွင် ပြည်ထဲရေးရာများနှင့် ပက်သက်၍ တိုင်ပင်ကြံစည်ရန် ရှိသောအခါတို့လည်း ဗညားဒလကိုပင် ခေါ်ငင်တိုင်ပင်လေ့ရှိလေသည်။ တစ်ခါသော် သက္ကရာဇ် ၉၂၇ ခုနှစ်တွင် ဇင်းရုံးအရေး မျက်နှာမည်အရေးတို့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့၏။ ထိုအခါ ဘဝ ရှင်မင်းတရားကြီးလည်း သားတော် အိမ်ရှေ့မင်းနှင့်မှူးတကာ မတ်တကာတို့နှင့်တိုင်ပင်တော်မှူလေလျှင် ဗညားဒလသည် အချို့သော မှူးတကားမတ်တကာတို့နှင့် ဆန့်ကျင်၍ မကြောက်မရွံနောက်မတွန့်မူဘဲ မိမိ၏မြော်မြင်မှု၊ ဉာဏ်စွမ်းအလျောက် ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးအား သင့်နိုးရာရာလျှောက်ထားရာ ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးလည်း သည်ဗညားဒလအရေး’သည် ငါကြံတော်မှုသောအရေးနှင့်ညီလှ၏’ ဟုဗညားဒလ လျှောက်ထားချက်အတိုင်း စီရင်တော်မူ၏။ သို့စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းလည်း အရေးတော်ပြီးပြေအောင်မြင်ရသည်သာမက ထိုနှစ်အတွင်းမှာပင် လက်ဆောင်တော် အထူးထူးနှင့် ဇင်းရုံးမင်းသမီး၊ မျက်နှာမည်းမင်းသမီးတို့ကိုဆက်လျာပို့သပြန်ရကား ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးက‘ဗညားဒလအရေးသည်အလွန်ဖြစ်ခဲလှ၏’ဟူ၍ ကြီးစွာသောဥဒါန်း၊ မော်ကွန်းစကားကိုလည်း မိန့်တော်မူ၏။ ကြီးစွာသောဆုကြီး၊ လာဘ်ကြီး၊ မှူးကြီး၊ မတ်ကြီးတို့၏အဆောင်အယောင်တို့ထက် လွန်ကြူး၍ အိမ်ကိုလေသာနှင့်တကွ ရေအိမ်ကြက်ခြေတင်နှင့်တကွ နေထိုင်စေရန် ဆုကြီးများကို ပေးတော်မူဘိသည်။ ဤသို့ဘဝရှင်မင်းတရားကြီး၏ တိုင်ပင်တော်တိုင်ပင်ဘက် လက်ရုံးသဖွယ်ဖြစ်ပေသော ပညာရှိအမတ်ဖြစ်ရကားသက္ကရာဇ် ၉၂၈ ခုနှစ်မှစ၍ ဟံသာဝတီမြို့သစ်တည်ရာ၌လည်းကောင်း၊ သက္ကရာဇ် ၉၂၉ ခုနှစ်တွင် ရွှေနန်းတော်တည်ရာ၌ လည်းကောင်း ဗညားဒလကိုပင်ဝန်၊ စီရင်တော်မှု၏ နောက်ထိုသက္ကရာဇ်၉၂၉ခုနှစ် အတွင်း ထိုနန်းတော်ကြီး၌ပင် အဆောင်နေရာပေးတော်မူရာ၌ ဗညားဒလအမတ်ကြီး၏ အမည်မှာ ထိပ်ဆုံးကပါလာသည်။ ပါဟန်ကား- ဗညားဒလကိုနေရာတော်လက်ဝဲတော်ဦးဗောင်းကတ္တီပါမွမ်း၊ အမဗောင်းကတ္တီပါရွှေပြောင်းမွမ်း၊ အဖျားကတောင်ရွှေသားလေးမတ်၊ သင်ကျစ်လေးမျက်နှာစိန်တောရံ၊ စလွယ်၉သွယ်၊ သက္ကလပ်အဖုံးနှင့်တကွ၊ ရွှေကရား၊ ရွှေမြူးတေး၊ ရွှေလင်ပန်းပတ်တမြားတောင်ဝှေး၊ ပတ်တမြားပန်းချင်း၊ ခြေမစွပ်၊ လက်မစွပ်မှီအုံးလက်ဆေးအင်၊ ထီးနီညောင်ရွက်သုံးဆင့်၊ ထီးရိုးထီးလက်၊ရွှေသံလျှင်တနဲခုနှစ်ဝန်း၊ စည်ခုနှစ်လုံးနှဲသုံး၊ ခရားသုံး၊ အိမ် ငါးဆက်၊ ကြက်နင်း ငါးတန်၊ လေသာတဲ့လား၊ ကငေါက်နှင့်လှေစခင် အယင်းချင်ပိတ်နီ၊ ဖဲပေါင်းအစိမ်းမိုးပေးတော်မူးသည်။ ရုံးလည်းရသည်။ ဤအဆောင်နေရာ၊ ဤ အဆောင်အယောင်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘဝ ရှင်မင်းတရားကြီးသည် ဗညားဒလအား မည်မျှအရေးပေး လေးစာတော်မူကြောင်းကိုသိနိုင်သည်။ ၉၃၄ ခုနှစ်တွင် လင်းဇင်းဗညားသေရ်အရေး ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဤအရေးတွင်ကား အမတ်ကြီးဗညားဒလက ဇင်းကျေးသောင်းရက်သို့ကျွန်တော်သွား၍ ဗညားသေရ်ကို အရေးဆိုမည်။ ယင်းသို့ ဆို၍ အရေးတော်မပြီးမှ ညီတော် သားတော်တို့ကိုအလုံးအရင်များနှင့် ချီစေ၍ လုပ်ကြံတော်မူစေသင့်သည်ဟု လျှောက်ထားသည်။ မင်းတရားကြီးလည်း ဤအရေးသင့်လှသည်ဟု မိန်ကြားပြီး ဗညားဒလသွား၍ အရေးတော်ဆိုချေဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။ အမတ်ကြီးဗညားဒလလည်းစစ်သည်ဗိုလ်ပါ ဆင်လုံးမြင်းလုံးများနှင့် ချီရာ လင်းဇင်းအနီး သောင်ရက်ရောက်လျှင် သံနှစ်ယောက်ကို ရာဇသံစေလိုက်သည်။လင်းဇင်းဗညားသေရ်သည် မချေမငံသော စကားကိုဆိုသည်။ ယခုပင် ငါချီ၍ လင်းဇင်းသားတိုကို တိုက်ခိုက်တော်မူမည်ဟုဆိုသည် ။ သိုရာတွင် စစ်မူးစစ်ကဲတို့က အလုံးအရင်းလည်းနည်းသည်။ သောင်ရက်တွင် နှစ်လခန့်နေပြီး၍ မျိုးရိက္ခာလည်းကုန်ရာ ကြံ၍လည်းမရသောကြောင့် ရဲမတ်အပေါင်းတို့လည်းငတ်မွတ်ညှိုးငယ်ကြကုန်၏။ ဇင်းမယ်စစ်ကူ ယိုးဒယားစစ်ကူတို့လည်း မရောက်သေး။ ထိုကြောင့် ငံ့ဦးမှ သင့်မည်ဆိုလေလျှင် မျိုးရိက္ခာလည်းရှာကြံရင်း စစ်ကူများကိုလည်းစောင့်ဆိုင်ရင်း သောင်ရက်မှဆွတ်ခွာပြန်လာသည်။ ဗညားဒလတို့သောင်ရက်မှ ပြန်လာပြီ ဟူ၍ကြားလျှင် အရေးပြီး၍လာပြီထင်သောကြောင့် ယိုးဒယားစစ်ကူများလည်း မိမိတို့သောင်းရက်မြို့သို့ ပြန်ကြလေသည်။ ဇင်းမယ်စစ်ကူများလည်း ခရီးလတ်က ပြန်ကြ၍ ဗညားဒလ ပြန်လာကြောင်း မင်းတရားကြီးအား လျှောက်ထားကြသည်။
↑ Aung-Thwin, Michael A. (2005). The Mists of Rāmañña: The Legend that was Lower Burma, illustrated, Honolulu: University of Hawai'i Press, 133–134. ISBN 978-0-8248-2886-8။
↑ ဗညားဒလ ရန်ကုန် ၊မြန်မာနိုင်ငံစာပေပြန့်ပွားရေးအသင်း စာ ၁၈၅ ၊ ၂၀၃
↑ မောင်သုတ(ဗိုလ်မှူးဘသောင်း) စာဆိုတော်များအတ်ထုပွတ်တိ၊ ရန်ကုန်၊ ဇွဲစာပေရိပ်မြုံ ၊ ပ ကြိမ် ၁၉၇၁ ၊ စာ ၁၂၃ ၊ ၁၂၇
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗညားဒလ_(ဝန်ကြီး)&oldid=471193" မှ ရယူရန်
၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၀၅:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၀၅:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။